people Nepal » सरकारको सूचना कसले पु-याउँछ भारतीय दूतावास ? सरकारको सूचना कसले पु-याउँछ भारतीय दूतावास ? – people Nepal
सरकारको सूचना कसले पु-याउँछ भारतीय दूतावास ?
जेठ १०,काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई गोपनीयता उल्लंघन गरे कानून लाग्ने भन्दै तर्साएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को जेठ ९ गते शुक्रबारको बैठकमा सरकारको गोपनीयता कायम गर्न नसकेको भन्दै उनी आक्रोशित थिए।
राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित भएको गुप्तचरसम्बन्धी एउटा विवादास्पद कानून उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको फोन ट्यापिङ गर्न सकिने धम्की पनि दिए। सम्झाउने शैलीमा दिएको धम्की सम्झदै एकजना मन्त्रीले भने, ‘अव फोन ट्याप गर्न सकिन्छ भन्ने पनि बुझ्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।’